Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra | Apg29
Maro ny olona ankehitriny velona amin'ny tsy fahalalana tanteraka ny momba an'Andriamanitra sy ny fiainana fa Izy tolotra.
Rehefa matoky an'i Jesosy, dia ho zanak 'Andriamanitra. Mitaona ny Fanahin'Andriamanitra ao am-ponao ka feno ny fitiavan'Andriamanitra. Jesosy, dia nampitaha azy amin'ny rano velona.
Jesosy nipetraka teo amin'ny fantsakana, ary miresaka amim-behivavy.
"Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy Izay miteny aminao hoe: Omeo Aho hosotroiko, dia ianao no ho nangataka taminy, ka ho nomeny rano velona." Jn. 4:10
Maro ny olona ankehitriny velona amin'ny tsy fahalalana tanteraka ny momba an'Andriamanitra sy ny fiainana fa Izy tolotra. Ary misy ireo izay milaza fa mahalala ny zavatra momba ny teny mafy izany, fa ny zava-poana no novokarina misaraka.
Mba hahitana ny tolotra ho ny olona tsirairay izay nila nitodika tany amin'ny Baiboly. Raha ny Baiboly ianao, dia indrisy maro fihetseham-po toy ny "mankaleo sy hahaliana boky". Na dia izany dia Hadisoana.
Inona no tokony ho avy eo?
Ny fitiavana an'Andriamanitra no ambara amintsika avy ny Zanak 'Andriamanitra, Jesosy naka ny fahotana sazy teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra naka ny dingana voalohany, ary manolotra antsika ny famelan-keloka. Afaka manana feon'ny fieritreretana madio. Andriamanitra te-hanamarina ny fitiavany antsika isika rehefa misafidy ny mino an'i Jesosy.
Ny vehivavy izay nolazain'i Jesosy tamin'ny eritreritra fa holazaina rano tsotra. Tsy izy na dia ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, ary iza no niteny taminy.
"Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izay rehetra misotro ity rano ity dia ho hangetaheta intsony. Fa na iza na iza misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta. Raha tsy misy ny rano izay homeko azy dia ho ao aminy ny loharanom- rano miboiboika ho fiainana mandrakizay. " Jn. 4: 13-14
Ny teny ao amin'ny Baiboly voasoratra ny olona, ​​fa ny teny izy ireo, izay avy amin'Andriamanitra. Ny vehivavy tsy tamin'ny voalohany, fa tatỳ aoriana, izay niresaka taminy. Rehefa handray anjara ao amin'ny Baiboly, hahatakatra fa rehefa mandray anjara ny tenin 'Andriamanitra, lanitra sy ny tany. Ary ny tolotra amin'ity raharaha ity dia ny hoe afaka manana loharanom ao anatinareo. Ny loharanom-baovao izay manao tsara ka tsy maina nihazakazaka. Ary tsy mijery ny eto sy ny any. Ianao dia manana ny fanomezana ny fiainana ao anatinareo. Ny Fanahin'Andriamanitra no te mitoetra ao anatinareo. Te hanampy anao hiaina ny fiainana kristianina. Tena mahafinaritra. Ny fanomezam-pahasoavan'ny fiainana, fiadanana, fitiavana sy fifaliana. Rehetra noho ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika amin'ny alalan'ny nitsanganany tamin'ny maty. Izany, ry namako, dia niavaka izao tontolo izao tapaka famorian-drano. Fahotana very ny antso rehefa mahazo ny hanandrana ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra.
Ahoana no hahazoana ny fanomezana?
"... dia ianao no ho nangataka taminy hoe: - Bed sy ny rano velona i Jesoa
"... ary nomeny rano velona." - Jesosy dia manome fiainana ianao, rehefa mangataka aminy.
Tsy azonao mihitsy ny zava-drehetra, fa afaka soa aman-tsara ihany no fantany fa Andriamanitra no manome zava-tsoa. Mariho ny rano velona amin'izao fotoana izao. Ary manadio anao sy manome hery vaovao anao sy ny fiainana. Sokafy ny Baiboly sy hamaky bebe kokoa momba ny fiainana mahafinaritra tamin'i Jesosy.
Andriamanitra anie hitahy anareo